Daawo Mucjisadan Naxtinta Badan "Gabar Dhididkeedu Yahay Dhiig Ilinteeduna Tahay Dhagax Subxaanalaah" - iftineducation.com
iftineducation.com – Subxaanalaaah Bal kawaran qof ay dhowr dhib isugu darsameen oo misna dumar ah ? Gabar u dhalatay wadanka Yaman ayaa habeenkii koobaad ee arooskeeda waxaa jirkeeda kasoodaatay dhiig halkii uu dhidid kasoobixi lahaa, waxaana in dheheeda ka soo daatay dhagax halkii Ilin ay ka soobixi lahayd… Markaas kadib maxaa dhacay? YAA ILAAHI Bal eeg… Ninkii soo guursaday isla habeenkiiba dalaaqadeeda ayuu farta ka saaray oo wuu furay.. Maskiin …. waxay dib ugu soolaabatay hooyadeed oo agoon hesata ..
Sabuura Xasanil Faqiih oo ah gabadha ay arintaani ku dhacday ayaa cudurkeedaan waxaa ka yaabay dhaqaatiirta oo sheegay in uu yahay wax aysan waligood arag. Habeenkii koobaad ee arooskeeda ayeey arintaani isku aragtay waa yaabtay kadibna ninkeedii sidaas ayuu kusoo furay.. Waligaa mamaqashay mana aragtay qof indhihiisa iyo dhagihiisa ay dhagax kasoodaadanayaan ? Qof meeshii dhidid uu kasoobixi lahaa dhiig uu kasoobaxayo? Waa dhibaatadda hesta walaasheen Sabbuura Xasan Faqiih oo u dhalatay wadanka Aan xaga biyaha dariska kanahay ee YAman.